Ị ga-ahụ ụdị kọmpụta niile dị ebe a
Enwere ọtụtụ ụdị laptọọpụ. Ha niile nwere njirimara dị iche iche yana nke enwere ike ịmegharị nke ọma maka ụfọdụ ngwa ma ọ bụ ndị ọrụ. Ọ bụrụ na i burularị n'uche ụdị laptọọpụ ị chọrọ, ị nwere ike ịjụ n'ime ụdị a kapịrị ọnụ ebe a ga-egosi gị ụdị kacha mma n'ahịa.
Otu a ị ga-elekwasị anya chọta ezigbo laptọọpụ, ma na njirimara teknụzụ yana ọnụahịa, na-enweghị nchegbu ma ọ bụ ụdị ị na-achọ: ultrabooks, gameing, convertibles or 2 in 1, etc.
na ultrathin laptọọpụ Ha bụ ọkacha mmasị nke ọtụtụ ndị ọrụ. Ihe kpatara ya bụ na ha nwere nhazi mara mma, yana ezigbo arụmọrụ. Mana, karịa ihe niile, nnukwu ngagharị nke ngwaọrụ ndị a pụtara, ebe ọ bụ na ha dị oke mkpa na kọmpat, na mgbakwunye na iji ibe ndị na-eri obere obere ka batrị wee dịrị ogologo oge enwere ike.
Agbanyeghị, na ọnụ ahịa nke ahụ mfe nke iburu ha site n'otu ebe gaa n'ọzọ; ma ọ bụ iji ha ruo ogologo oge site n'ebe ọ bụla ị chọrọ ha n'enweghị nchegbu banyere ibu ahụ, ha nwekwara ike ịnye ụfọdụ njedebe n'ihe gbasara ngwaike nwere ike ịwụnye, usoro jụrụ oyi, ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ ọdụ ụgbọ mmiri dị na akụkụ ha dị ntakịrị.
Hụ laptops ultrathin niile
Ụfọdụ ụdị laptọọpụ ndị China jisiri ike nweta akara n'ahịa, dịka ha na-egosi ụfọdụ ezigbo uru maka ego. Ha bụ akụrụngwa dị ọnụ ala nke nwere ike imeju ọtụtụ ndị ọrụ na ụfọdụ gụnyere atụmatụ adịchaghị.
Biko mara nke ahụ Ndị na-emepụta ya N'ime otu ndị a nwere ike ịdị ka nke ụdị ndị ọzọ a ma ama, naanị na site na enweghị akara akara ama ama, ọnụahịa ahụ nwere ike gbanwee karịa. Ya bụ, ọ pụtaghị na ha adịghị mma ...
Hụ laptọọpụ ndị China niile
na Ngosipụta 4K ha na-adị ọnụ ala. Nkà na ụzụ nke ogwe ndị a amalitela yana ọnụ ahịa ha, na-ekwe ka laptọọpụ a na-emekarị ka ọ na-ebuli ụdị panel nke dị elu.
Ụdị laptọọpụ ndị a dị mma maka ndị chọrọ nsonaazụ anya kacha mma, na nke ahụ na-eme maka ndị na-emepụta ihe nkiri, ndị na-edezi vidiyo, ọbụna ndị egwuregwu na-achọ ịme egwuregwu ha na mkpebi kachasị elu.
Hụ kọmpụta 4K niile
na gamers Ha nwere ụdị dịgasị iche iche nwere ngwaike dị ike nke ukwuu iji nwee ike ịme aha egwuregwu vidiyo AAA kachasị ọhụrụ. Maka nke a, kọmpụta ndị a nwere ezigbo nhazi CPU, GPU na RAM, na mgbakwunye na ịgụnye draịva steeti siri ike maka nchekwa, nke na-enye ohere maka nbudata ngwa ngwa.
Kọmputa ndị a na-enwekwa ihuenyo buru ibu, yana ezigbo ume ọhụrụ, mkpebi dị elu, yana nkọwa ndị ọzọ dị ka ahụigodo nwere ọkụ RGB.
Hụ laptọọpụ egwuregwu niile
2-na-1 laptọọpụ na-agbanwe agbanwe
na mgbanwe mgbanwe, ma ọ bụ 2 n'ime 1, Ha bụ kọmpụta a na-ebugharị ebugharị nke na-ekerịta myirịta na ultrabooks, ebe ọ bụ na ha na-enwekarị ngagharị dị elu, n'ihi ngwaike ha na-arụ ọrụ nke ọma, ndụ batrị dị ukwuu, yana mbelata akụkụ.
Kama, ha dị iche na akwụkwọ ultrabook a na-emekarị n'ihi na enwere ike ịtụgharị ha ka ọ bụrụ ihuenyo mmetụ ma nwee ike ịbụ. tụgharịa ghọọ mbadamba nkume dị ka ọ dị mkpa. Ya bụ, enwere ike mpịaji ma ọ bụ wepụ kiiboodu, iji naanị ihuenyo n'onwe ya. Ya mere ị nwere ihe kacha mma nke ụwa abụọ n'otu ngwaọrụ.
Hụ kọmpụta 2-na-1 niile
Un ultrabook ma ọ bụ ultraportable ọ bụghị ihe ọ bụla karịa kọmpụta dị gịrịgịrị nke nwere nnukwu ngagharị. Ndị otu a nwere ọmarịcha arụmọrụ, yana ndụ batrị dị ịtụnanya n'ezie. Ha na-akụ obere obere ma nwee ike ibu ya ngwa ngwa n'ebe ọ bụla, yabụ ọ ga-adị mma maka ndị chọrọ iburu ya n'ụgbọ njem ọha, na-arụ ọrụ na cafeterias, na-egwu egwu mgbe ị na-aga ụgbọ oloko, wdg.
Agbanyeghị, ha nwere oke n'ihe gbasara ọnụọgụ ọdụ ụgbọ mmiri dị, n'ihi otú ha si dị gịrịgịrị, jụrụ oyi, na ụdị ngwaike ha na-agụnye (na-emekarị Mobile ma ọ bụ Ultra Low Power nsụgharị) nke na-achụ ụfọdụ arụmọrụ iji meziwanye ike ike.
Hụ akwụkwọ ultrabook niile
Ha dabara ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ laptọọpụ ụlọ. A akwụkwọ ọ bụ laptọọpụ nkịtị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, otu ndị nwere nguzozi n'etiti mmegharị na arụmọrụ. Ha na-ebuli ngwaike dị ike karịa ụfọdụ ultrabooks, ebe ha nwere ohere zuru oke iji bulie ihe ngwọta jụrụ oyi nke ibe ndị ahụ dị elu chọrọ.
Ha gụnyekwara ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ, na enwere ike ịgbasawanye ha n'ụzọ dị mfe, ebe ọ bụ na ha anaghị ejikarị RAM eme ihe na bọọdụ, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, yana inwe oghere ndị ọzọ.
Hụ akwụkwọ ndetu niile
El Chromebook Ọ bụ kọmpụta nke ụdị dị ka Acer, HP, ASUS, Lenovo, wdg arụpụtara, yana sistemụ arụmọrụ Google Chrome. Nke a ga-enye gị ohere iji sistemu siri ike, echekwara ma kwụsie ike, yana ọrụ igwe ojii Google agbakwunyere (Gdrive, Google Docs, Gmail, ...), yabụ ị gaghị echegbu onwe gị maka ihe ọ bụla. Na mgbakwunye, ọ na-enye gị ohere ịwụnye ngwa ngwa Android niile.
N'aka nke ọzọ, ha na-enwekarị nhazi dabere na ARM ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ x86 dị ala, na-eri obere nri, nke na-enye ha ndụ batrị dị elu. Maka ihe niile, ha bụ mamụọ maka ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ ndị chọrọ usoro nke na-enweghị nsogbu maka ọrụ ndị bụ isi dị ka nchọgharị, ikiri vidiyo, ịkpọ egwu, wdg.
Hụ akwụkwọ chrome niile
Nke nta nke nta, draịva magnetik, ma ọ bụ HDD, ejirila dochie ya SSD nke oge a. Ndị draịva steeti ndị a siri ike abụghị naanị na ọ siri ike na ngwa ngwa karịa draịva siri ike, ha dịkwa obere nha, nke bụ nnukwu uru maka otu ebe ohere dị oke.
Ọzọkwa, ọtụtụ ndị ọrụ ga-enwe ike irite uru na njirimara ọsọ nke SSD. N'agbanyeghị inwe ikike dị ala maka nha nha na HDD, ohere ndị ahụ bụ oke ngwa ngwa. Na nke ahụ pụtara ìhè na ọsọ nke sistemụ arụmọrụ na-amalite, ma ọ bụ ike nke ngwa na egwuregwu vidiyo na-ebu.
Hụ laptọọpụ niile nwere SSD
Ịhọrọ laptọọpụ mgbanwe (ma ọ bụ laptọọpụ 2-in-1) adịghị mfe. Site na ntụnyere a, ị ga-ahụ nke kacha mma na ọnụ ala. Kedu nke a ga-azụta?
Na-achọ laptọọpụ mmetụ aka? N'ebe a, ị ga-ahụ onyinye na ụdị kachasị mma iji nweta ahụmahụ dị ka mmiri dị ka na mbadamba nkume
Ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ laptọọpụ Linux, lelee ntụnyere anyị ka ịhụ nke ka mma ịzụta ma mee mkpebi kacha mma.
Ị chọrọ ịzụta laptọọpụ na SSD? Banye wee hụ ntụnyere emelitere anyị yana ụdị kachasị mma dị ugbu a.
Ntuziaka ịzụrụ maka laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ emelitere ka ị nwee ike zụta kọmpụta dị ọnụ ala site na ichekwa ikikere Windows
Anyị na-enyere gị aka ịzụta otu n'ime ultrabooks dị ọnụ ala nke nwere njirimara kachasị mma nke afọ a na ntụnyere a. Kedu ihe bụ nke gị?
Ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ nwere ihuenyo UHD, ebe a ị ga-ahụ laptọọpụ 4K kacha mma iji lelee foto, vidiyo ma ọ bụ egwuregwu nwere mkpebi na ịdị mma kachasị elu.
Ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ dị fechaa, nke dịkwa mkpa nke nwekwara ike, ebe a anyị ga-enyere gị aka ịhọrọ ụdị ịchọrọ. Kedu nke masịrị gị?
Na-achọ laptọọpụ ndị China dị ọnụ ala na ntụkwasị obi? Anyị na-egosi gị laptọọpụ ndị China kacha mma ka ị nwee ọ enjoyụ na kọmpụta n'ọnụ ahịa kacha mma.
Kedu ihe kacha mma laptọọpụ egwuregwu? Chọta laptọọpụ gamer ịchọrọ na ntụnyere emelitere yana ụdị na onyinye kacha mma
Ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ otu n'ime akwụkwọ ndetu dị ọnụ ala na ahịa na ntụnyere a, ị ga-ahụ uru kacha mma maka ego.
N'ime obere laptọọpụ niile, nke ị ga-azụta? Anyị na-enyere gị aka ịhọrọ n'etiti chromebook, ultrabooks na kọmputa ndị ọzọ dị fechaa.